हमाललाई पहिलो फिल्मबाट निकाल्दै डाइरेक्टरले भनेका थिए- "तँबाट अभिनय हुनसक्दैन" - Everest Talk
हमाललाई पहिलो फिल्मबाट निकाल्दै डाइरेक्टरले भनेका थिए- “तँबाट अभिनय हुनसक्दैन” 1 min read
राजेश हमाल सम्पन्न परिवारमा जन्मेको भने सत्य हो, तर उनीले आफ्नो नाम चिनाउने क्रममा गरेका सर्घषको कथा भने बेग्लै छ । सम्पन्न व्यक्तिलाई पनि दुःख हुन्छ भन्ने प्रमाण हुन राजेश हमाल ।
२०७६, १७ माघ शुक्रबार ०९:३३
प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा डनबोस्कोले आयोजना गरेको मिट फर कन्स्ट्रक्टीभ फ्यूचर कार्यक्रममा विद्यार्थीको घुइँचो हेर्न लायकको थियो । कार्यक्रम ढिलो सुरु हुनु नेपालको रीत हो भने कार्यक्रम ढिलै सुरु हुन्छ भनेर अथिति ढिलो आउनु पनि लगभग संस्कार नै बन्न लागेको अवस्था छ, हामी नेपालीका लागि ।
विद्यार्थी र अन्य व्यक्ति समयको फाइदा उठाउँदै घामसँग गफ गरिरहेका थिए । घामलाई बादलले छेक्नेबेलामै कार्यक्रम सुरु भयो । मान्छेको हुल भवनभित्र पस्न सुरु गर्यो । केही भने घामलाई बादलले नछेकुन्जेल साथ दिने भनेर बसे, तर उनीहरू पनि एकैछिनमा भवनमा देखा परे । लाग्यो, घामले पनि धोका दियो । यो सहरमा धोकेबाजहरू भेटिन्न, तर धोका पाउनेहरूचाहिँ प्रसस्तै भेटिन्छन् ।
दिनको ठीक १ बजेको थियो, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सिइिओ किरण श्रेष्ठ मञ्चबाट केही भनिरहेका थिए । सुन्नेले चुपचाप सुनिरहेका थिए । पछाडिको ढोकाबाट महानायक राजेश हमालको आगमन भयो । हलले उनलाई हुटिङले सहयोग गर्यो, बोलिरहेका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सिइिओ किरण श्रेष्ठ ओझेलमा परे ।
यसको अर्थ यो पनि हुन सक्छ, अहिले पनि राजेश हमालको क्रेजमा कत्ति पनि आँच आएको छैन । उनी जसरी चर्चित भए, उनले आफूलाई त्यसरी नै स्थिर राखेका छन् ।
क्रेज घटोस् पनि कसरी ? हजुरआमा रिसाएको बेला हजुरबाले उहाँलाई चलचत्रि मन्दिर लैजाँदा देखिएको अनुहार हो– राजेश हमाल । बुवाले आमालाई चोकमा पर्खेर विद्यालय छिर्नुभन्दा फिल्म हल जाउँ भन्दै लैजाँदा देखेको अनुहार हो– राजेश हमाल । र आजकालका क्युएफएक्समा मैले देखेको अनुहार हो– राजेश हमाल ।
हाम्रो पुस्ताले राजेश हमाललाई चलचित्रमा धेरैभन्दा धेरै त देखेको छैन होला, तर टिभी सो, अन्य कार्यक्रममा वा सामाजिक सञ्जालको मिम वा जोक्समा कत्ति पनि नछुट्ने नाम हो भनेर हामीले चिन्दै आएको भने पक्का हो ।
हरेक कुरामा एक्टिभ रहेर नै राजेश हमाल अहिलेसम्म देशमा चर्चित छन् । हुन त उनकै सुरुवाती दिनमा पनि नयाँ नायकहरू नआएका भने होइनन्, तर उनीहरूले आफूलाई चिन्न सकेनन् र आफैँसँग कतै हराइगए । संसारमा आफैँसँग हराउनु भनेको बाहिर संसारबाट गुमनाम हुनु पनि त हो |
समयसँगै आफूलाई स्तरन्नोति गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने पक्षमा राजेश हमाल सचेत छन् । उनी आफ्नो विगत सम्झँदै बताउँछन्- “पहिलोजस्तो अहिले केही पनि छैन | सबै नयाँ छन् । अब पहिलेकै कुरामा अल्झिनु पनि त भएन ! अब समयअनुसार आफूलाई नयाँ र फरक बनाउँदै लैजानुपर्दछ ।“
राजेश हमाललाई लाग्छ, हरेक व्यक्तिले आफूभित्र आत्मविश्वास भन्ने कुराको विकाश सुरुदेखि नै गर्नुपर्दछ । हरेक क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा आफैँसँग आत्मविश्वासलाई पनि लगियो भने मान्छे कहिल्यै पछि पर्दैन ।
माइकलाई आफूभन्दा टाढा लगेर कोटको बाहुला माथि सार्दै गर्दा उनको यो लाइन सकियो । दर्शकको तालीले राजेश हमाल चोरी औँलाले चस्मा मिलाउँदै आफ्नो विगत सम्झन सुरु गर्छन्-
जब राजेश हमालले चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरे, उनको पहिलो फिल्म नै रिलिज भएन । उनलाई जीवनकै पहिलो डिरेक्टरले “तँ अभिनय गर्न सक्दैनस्“ भनेर फिल्मको टिमबाट निकालिदिए । तर उनलाई विश्वास थियो– “म अभिनय गर्न सक्छु, मैले यो टिमसँग मात्र काम गर्न नसेकेको हुँ ।“
जब अन्य चलचित्रमा उनले अभिनय सुरु गरे, तब उनको अभिनयको सबैतिरबाट हाइहाइ भयो । उनले आफूलाई विश्वास गरेर नै आज यहाँसम्म आइपुगेको कुरा बताउँछन् । उनको जीवनमा एकै सिद्धान्त छ– “आफूलाई विश्वास गरौँ ।“
नेपाली सिनेमालाई धेरै लामो समयसम्म लिड गरेका हमालले “मैले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अवार्ड पाइनँ” भनेर कहिल्यै गुनासो गरेनन् । कारण, उनले बजारको अर्थ बुझेका छन् । अवार्डको सीमारेखा उनलाई थाहा छ । तब न उनी महानायक !!!
महानायक बन्न सायद व्यक्तित्वले मात्र हुँदैन, हृदय पनि चाहिन्छ ।
हमाल भन्छन्– “हामी भारतको सिनेमा बजार ठूलो भनिरहेका छौँ । तर यो गलत हो । जहाँ–जहाँ भारतीय छन्, त्यहाँ मात्र भारतीय सिनेमाको बजार छ ।“
जब–जब उनको हातमा माइक पर्दथ्यो, तब चिच्याहटले भवनको माहोल अर्कै बन्थ्यो । उनले युथलाई हरबखत अपग्रेड बन्न सुझाव दिएका छन् । उनको यही स्वभावले राजेश हमाल बनाएको हो भन्दा कति पनि ग्लानी हुँदैन । उनले सँधै युथसँग रहेर काम गरेकाले उनलाई हामी प्रविधिसँग नजिक रहनुपर्छ भन्ने लाग्नु स्वाभाविक हो ।
अन्त्यतिर, हाँस्यरस प्रचुर मात्रामा भएका हमालले युथलाई भने– “तपाईँ मभन्दा दुई-चार वर्ष जेठो हुनुहुन्छ ।“ उनले यो भनिरहँदा हलले के बुझ्यो थाहा भएन, तर मैले बुझेँ कि राजेश हमाललाई बूढो हुन मन छैन । उनी सँधैभर जवान भएर नेपाली सिने जगतका लागि काम गर्न चाहान्छन् ।
Tags: निरज दाहालफिल्ममहानायकराजेश हमाल